NL (ခ) ဒီအမောင်: 08/22/13
You Tube က movies ဖိုင်စ်တွေကို Download software တွေရဲ့ အကူအညီမလိုပဲ ယူရအောင်
◄ You Tube က movies ဖိုင်စ်တွေကို Download software တွေရဲ့ အကူအညီမလိုပဲ ယူရအောင် ►
ကဲ ချစ်ခင်လှသော သူငယ်ချင်းတို့ ..
You Tube က movies ဖိုင်စ်တွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဒေါင်းလော့စ် လုပ်ပြီးယူနိုင်တာကတော့ ..
ဒါပင်မဲ့ မိမိ စက်မှာ Download Software တွေမရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ..အတွက် ..
တစ်ချို့ဆို Internet Download Manager ဆိုတဲ့ ဆော့စ်ဝဲကို အသုံးပြုသူများပါတယ်..
ထိုနည်းအတူ .. မိမိ ကွန်ပျူတာမှာ ... ဒေါင်းလော့စ် ဆော့စ်ဝဲမလိုပဲ .. ယူနည်းလေး တစ်ခု မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. ။။
အရမ်းကို လွယ်ပြီး မသိတဲ့သူတွေအတွက် .. ဟာာာာာာာာာာာာ ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပါမယ်..
ပထမဆုံး You Tube ကိုသွားပြီး ..မိမိနှစ်သက်တဲ့ သီချင်းကို ရှာလိုက်ပါ..ဖွင့်လိုက်ပါ..
ပီးရင်... ဒေါင်းလော့စ် လုပ်ယူမယ်ဆိုလျှင်
Posted by nllamin.com at 10:39 PM
Window7အသုံးပြုသူများအတွက် ◄ User account အသစ်ဖွင့်နည်း
◄ Window7အသုံးပြုသူများအတွက် ◄ User account အသစ်ဖွင့်နည်း ►
တတ်သည့် ပညာမနေသာဆိုသလို ..
တတ်ထားတာလေး နည်းနည်း ပြန်မျှလိုက်တယ်..
ညက သူငယ်ချင်း ညီညီနဲ့ ... ဒီကြောင်းလေးပြောဖြစ်လို့ .. တင်ပြလိုက်တာပါ..
သိပီးသောသူတွေအတွက် မရည်၇ွယ်ပါဘူး မသိသေးသော သူများအတွက် ...
ကဲ ကဲ... စလုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်
ပထမဆုံး Control Panel ကို သွားလိုက်ပါ ... ရောက်ပြီဆို..
(User Accounts and Family Safety) ခေါင်းစဉ်ကို ရှာပါ .. တွေ့ရင် ..
သူ့အောက်မှာ - Add or remove user accounts ကိုနှိပ်ပါ..
(Choose the account you would like to change) တွေ့ပါမယ် အဲ့အောက်မှာ -
Createanew account လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် ...
(Name the account and choose an account type) ခေါင်းစဉ်တွေ့ပါမယ် ..
account name ကို မိမိ၏ အမည် (သို့) မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ နာမည်ပေးလိုက်ပါ..
ပေးပြီးရင် .. create account ကို နှိပ်လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် ရပါပြီ.. User Account အသစ်တစ်ခု .. ။
မိမိ အသစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ နာမည်အပေါ်ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ..အဲ့ထဲမှာ ..
ပတ်ဝေါ့စ် / လိုကို ပုံတွေ ပြောင်းလို့ရပါတယ်.. / အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. ။
အခုလို User Account အသစ်ဖွင့်လိုက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေ ကိုယ့်စက်ကို လာအသုံးပြုသူတွေကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာကို မနှစ်သက် မသုံးနဲ့လို့လဲ ပြောရမှာ မကောင်း ..
ဒါကြောင့် ဒီလို အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖွင့်ပြီး ... အဆင်ပြေစွာနေနိုင်ပါတယ်.. ။
ကျွန်တော်လည်း .. အခု သင်တန်းကနေ တင်ပြလိုက်တာမို့ ..
ပြောပြတာလေးတွေ အဆင်မပြေ / လိုအပ်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင် .. ဖြည့်စွက်နားလည်ပေးပါလို့ ..
ပြောရင်...။ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေသား .....
သိသမျှ တတ်သမျှလေးကို တတ်အားသ၍ ပြန်လည်ကာ မျှဝေလိုက်ပါသည်..
အားလုံးကို လေးစားလျက် ( အန်လ်အယ်လ်အေ) /-
Posted by nllamin.com at 10:38 PM
ကဲ ဒီနေ့လေးဖို့ သူငယ်ချင်းတွေ မိမိကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဆိုဒ်လေးရှိရင် အောက်ပါနည်းလမ်းလေးကို သဘောကျမယ် ထင်လို့ လေ့လာထားသမျှ ကိုးကားထားသမျှ ကျွန်တော်(အန်လ်အယ်လ်အေ) ပြန်လည်ကာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. ။
မင်္ဂလာပါ ဘလော့မိတ်ဆွေအပေါင်းးတို့....သည်တခါတင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ ဘလော့ကာ များအတွက် အတော်လေးကိုအသုံးဝင်ပြီး ထိရောက်စေတဲ့နည်းပညာလေးပါ...ဘာလဲဆိုတော့
ကျနော်တို့ ဘလော့ကာတွေမှာ Labels တွေများပျားလာတာနဲ့အမျှ နေရာအခက်ခဲတွေ့နေကြရပါတယ်.
အဲအတွက် လေဘယ်တွေကို cloud ထားကြရပြန်တယ်.အဲလို ထားပြန်တော့ လေဘယ်တွေက
အက္ခရာအစီစဉ်မကျတော့ပြန်ဘူးးဗျ.... အဲတော့ ကျွန်တော် တင်ဖို့ သည်နည်းလေးကို သိမ်းးထားတာ ကြာပြီ.....ဆောရီးးပါ အမှတ်တမဲ့နဲ့ မေ့လျော့နေခဲ့တယ်... အခု ကျနော် လယ်တီမြေသား ဆိုဒ်မှာ လေဘယ်တွေ အရမ်းများနေတော့မှ ပြန်သတိယတယ်... သိမ်းးထားတာ မနည်းလိုက်ရှာယူရတယ်...
လက်တွေ့ကျကျ စမ်းသတ်ပေးပြီးမှပြန်လည် မျှဝေခြင်းပါ
ယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နှို်ပါတယ်...နော်
အောက်မှာ နည်းလမ်းနဲ့ လိုအပ်သော ကုဒ်တွေပေးထားပါတယ်...
"]]></b:skin>" သည်ကုဒ်ကို ရှာလိုက်ပါ.. တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့အပေါ်ကနေကပ်လျှက် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ကုဒ်တွေ ထည့်လိုက်ပါ။
Posted by nllamin.com at 10:37 PM
မိမိကိုယ်ပိုင် FACEBOOK အကောင့်ကို HACK ခံရခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း
◄ မိမိကိုယ်ပိုင် FACEBOOK အကောင့်ကို HACK ခံရခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း ►
ကျနော်တို့ဒီရက်ပိုင်းမှာ Virus တွေတော်တော်များများပြန့်နှံနေပြီး စိတ်ရူပ်စရာကောင်းနေပါတယ်။
ပြီးတော့ နာမည်ကြီး Celebrity တွေရဲ့အကောင့်တွေ Hack ခံနေရတာလည်း တွေ့ရှိနေရပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ တင်ပြီးသားပါခင်ဗျာ။ အခုကျနော်တို့ဆီကို နာမည်ကြီး ပေ့ခ်ျတွေလည်းအဟက်ခံနေရပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် တခြားလူတွေကိုလည်း သတိလေးေ ပးပေးပါဆိုပြီး မက်ဆေ့လေးတွေတော်တော်များများ ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် ထပ်မံတင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့မိမိတို့အကောင့်ကို မိမိတို့ သူများရန်မှ ကာကွယ်နိုင်၇န် အောက်ပါအချက်အလက်လေးများအတိုင်း လိုက်နာကြပါရန် ဒီဆောင်းပါးလေးအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မိမိရဲ့ Chat Box or Wall ပေါ်ဖြစ်စေ လင့်တွေတစ်ခါတစ်လေရောက်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်းကိုယ်မတဲ့သူကပို့တာ...တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ကို့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက် ကပို့တာ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ..ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လင့်တစ်ခုလို့ကို့စိတ်ထဲကထင်နေရင် ဘယ်တော့မှ စူးစမ်းချင်စိတ်နဲ့ မနှိပ်လိုက်ပါနဲ့။ အဲဒီလိုလင့်တွေဟာများသောအားဖြင့် Virus တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ် အဲဒီ Virus တွေဟာ ကို့နာမည်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ Wall ပေါ်မှာ Post တွေအလိုအလျောက် သွားတင်တတ်ပါတယ်။ စသည်ဖြင့် အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မည်သည့်လင့်မဆို မနှိပ်ခင်စဉ်းစားပါခင်ဗျာ။
(၂) Strong Password ထားပါ။
မိမိရဲ့ Facebook Password ကိုလွယ်ကူတဲ့စကားလုံးများဖြင့်မဖွဲ့စည်းထားပါနှင့်။ အနည်းဆုံး စာလုံးခြောက်လုံး၊ နံပါတ်တွေ၊ Punctuation Marks တွေပါဝင်တဲ့ Password ကိုသာအသုံးပြု ပါ။ ပြီးတော့ မိမိမှာအကောင့် ၂ခုရှိနေတယ်ဆိုရင် တူညီတဲ့ Password ကိုအသုံးမပြုဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by nllamin.com at 10:35 PM
◄ CD or DVD Drive Missing (CD/DVD Drive မပေါ်တဲ့ပြဿနာ)ကို ဖြေရှင်းနည်း ►
ဟိုင်း.. .ချစ်လှစ္စာသော သူငယ်ချင်းတို့ရေ..
ဒီနေ့လေးအတွက် လေ့လာစရာကောင်းတဲ့ ဆိုဒ်တွေထဲ ..
သိသင့် သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းလေး ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
ဒါကြောင့် ... အောက်ပါ လင့်စ်လေးကို နှိပ်၍ အဆင်ပြေပြေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်.ခင်ဗျာ..
Posted by nllamin.com at 10:34 PM
◄ Window7သမားတွေအတွက် Format ချ Window အသစ်တင်နည်းစာအုပ် ►
(ကိုးကားသမျှကို နိုးနိုးကြားကြား ပြန်လည်ကာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် .. လေးစားလျက် /- အန်လ်အယ်လ်အေ)
Posted by nllamin.com at 10:33 PM
◄ Iphone ကနေ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကို မိမိ pc မှာပြန်ရှယ်မယ် ►
မသိသေးသော သူတွေအတွက်ပါ သိချင် သုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ..
ပြန်လည်ကာ မျှဝေလိုက်တယ်.. နော်....
အောက်ပါ လင့်စ်လေးကို နှိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်.. ။
Posted by nllamin.com at 10:31 PM
You Tube က movies ဖိုင်စ်တွေကို Download software ...
Window7အသုံးပြုသူများအတွက် ◄ User account အသစ်ဖွ...
မိမိကိုယ်ပိုင် FACEBOOK အကောင့်ကို HACK ခံရခြင်းမှ...
◄ Iphone ကနေ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကို မိမိ pc မှာပြ...